Ny fampiharana finday tsara indrindra! Version 3 | Martech Zone
Ny fampiharana finday tsara indrindra! Version 3
Wednesday, May 1, 2013 Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Douglas Karr
Ny ekipa tsy mampino at Postano dia nanao azy indray, mihoatra ny andriko rehetra amin'ny fampiharana finday lehibe miaraka amin'ny Version 3 an'ny Martech. Mino aho fa ilay App iPhone Marketing tsara indrindra any ivelany (Android ho avy)!
Voalohany dia ny famolavolana endrika manintona izay mampiditra fitetezana ankavia toy ny Facebook. Manamora ny fanodinana sy ny fisafidianana ny sokajy na ny haino aman-jery tianao haleha - ao anatin'izany ny Podcasts, horonan-tsary ary ny hetsika - ary manatsara ny viewport rehefa mamaky lahatsoratra tokana. Izy io dia interface tsara sy mahasoa.
Tao anatin'ny 3 volana dia nitombo avo telo heny ny isan'ny mpampiasa fampiharana finday - efa ho 1,000 XNUMX izao. Ary, araka ny efa nosoratanay teo aloha, ny fandraisana andraikitra sy antontan'isa mifandraika amin'ireo mpampiasa fampiharana finday dia manaitra be. Ny mpampiasa anay dia mamaky bebe kokoa, mijery bebe kokoa, mihaino bebe kokoa ary mandany fotoana betsaka kokoa noho ny amin'ny media hafa. Misaotra Webtrends fa tsara analytics momba ny fampiharana finday!
Ny tena zava-dehibe angamba dia ny fampidirana tsy misy fangarony amin'ny WordPress dia midika fa tsy mila manao na inona na inona isika hitazonana ny fanavaozana ny fampiharana. Podcast, horonan-tsary, Lahatsoratra bilaogy ary lahatsoratra bilaogy notohanan'ny sokajy dia nohavaozina ho azy rehefa mamoaka atiny amin'ny tranokalanay izahay. Ny fampiharana aza dia misy fampandrenesana finday sy fahafaha-mitahiry ireo lahatsoratra tianao indrindra. Tena mendrika valisoa i Postano noho ny asa lehibe vitany.
Sintomy ny fampiharana finday anay izao!
Ireto ny statinay hatreto
Tags: app androidfampiharana iphonefampiharana bilaogy teknolojia marketingfampiharana findayfampiharana bilaogy findaypostanofampiharana postanoVersion 3Rindrambaiko finday wordpress
Tsy maty ny CISPA
ProPrompter: Fifandraisana amin'ny maso amin'ny Webcam anao